Nhau - Ndezvipi zvakanakira kubata zvese-mu-one
Ndeapi mabhenefiti ekubata ese-mu-one
Ikozvino kune akawanda uye akawanda michina zvigadzirwa, izvo kwete chete zvinobatsira vanhu kurerutsa chirongwa kusvika pamwero, asi zvakare kufambisa vashandi. Mune mamwe mapurogiramu ekugadzirisa, inogonawo kuchengetedza kuvanzika kwevatengi uye kudzivirira kuvuza kweruzivo rwakakodzera rwevatengi. Bata zvese-mu-mumwe muchina muenzaniso wakanaka. Parizvino, tinogona kuzviona munzvimbo huru dzeveruzhinji. Mupepeti anotevera achapfupikisa iwo ruzivo rwakakodzera rwe.
Kubata zvese-mu-mumwe muchina zvinoita kuti tigadzikane sekushandisa kwedu mbozhanhare. Hatichadi kutarisana nevashandi uye bundle inoenderana software uye inobata skrini. Uye zvakare, icho chigadzirwa chiri nyore kune veruzhinji kuti vashandise pamwe nezvimwe zvekurongedza kana zvigadzirwa, ndiko kuti, kushandisa kubata uye kutonga seyakazara, izvo zvinonyatso kuvandudza kushanda kwevanhu uye kuchengetedza nguva yakawanda yekuti vanhu vaite zvimwe zvinhu chinhu. Inoshandiswa zvakanyanya muzvipatara, zvitoro uye mabhanga.
Ndezvipi zvakanaka zvekubata zvese-mu-one?
1. Bata zvese-mu-imwe muchina kwete chete inotsigira USB interface, asi zvakare inotsigira chinyorwa chekunyora, icho chinounza nyore kune ruzhinji.
2. Bata hwaro hwakakosha, hunogona kugadziriswa zvinoenderana nedhigirii yakakodzera.
3. Multi touch, inogona kutsigira zvigunwe gumi zvinobata panguva imwe chete.
4. Iyo kona inogadziriswa, ichibvumira mushandisi kugadzirisa paanoda, 30 ° kana 90 ° kana hombe yekukwirisa kona inogona kugadziridzwa
5. Resistive touch screen, usanetseke nezve iyo yekubata skrini haina chokwadi, inogona kunyatso kuiswa.
6. Kubata hakufambe zvakasununguka, kunyangwe paine kufamba, inogona kuchinjirwa pachinzvimbo chakakodzera.
7. Iwe haugone kungobata nezvigunwe zvako, asi zvakare shandisa chinyoreso chakapfava pane zvigunwe zvako.
8. Iine tsanangudzo yepamusoro uye kunzwisisika. Inogona kushanda chero munharaunda.
9. Hupenyu hwekubaya hunogona kusvika miriyoni imwe nguva, pasina rubatsiro rwegonzo nemamwe midhiya, chero bedzi chigunwe chichigona kugadzirisa dambudziko. Inoratidza kudyidzana pakati pevanhu nemuchina.
Chii chinofanirwa kucherechedzwa kana uchiisa bata zvese mumushini mumwe?
1. Sezvo mazhinji ekubata echidzitiro zvikamu zvakagadzirwa negirazi, girazi iri nyore kutema maoko, saka kutarisirwa kwakakosha kunofanirwa kutorwa kana uchiisa, uye magurovhosi ekuchengetedza anofanira kupfekwa kusvika pazvinogoneka.
2.Girazi rekubata nderagirazi risina kusimba, zvisinei kuti rinotakurwa kana kuiswa, harigone kugogodzwa kana kumanikidzwa nedzimwe nyaya dzekunze.
3. Iyo yekubata skrini yakakamurwa kuita mativi maviri, imwe ndeye pamusoro pefirimu, ndiko kuti, iyo yekubata pamusoro, uye imwe iri kumashure kwegirazi. Tevedza rairo paunenge uchiisa.
4. Kazhinji, pane zvinotungamira pane inobata skrini. Paunotora, iwe unofanirwa kutarisisa kudzivirira kudhonza iyo inotungamira, zvichikonzera kusangana kwakashata kana yakavhurika redunhu.
5. Hazvibvumirwi kukotama ndiro yekusimbisa yemutsara unobuda, izvo zviri nyore kukonzera kutsemuka kwedunhu uye zvimwe zviitiko.
6. Hazvina mhosva kuti ndechipi chikamu chezvikamu chinofanirwa kubatwa zvinyoro panguva yekumisikidza kuti usachekacheke chinobata.
Kubata zvese-mu-mumwe muchina waunza kurerukirwa kukuru kuhupenyu hwedu, asi isu tinofanira kuedza nepatinogona napo kuti tiuteerere patinoishandisa. Kana paine chero dambudziko, tinofanirwa kubata vashandi munguva. Kune akawandisa pfupiso nezve kubata zvese-mu-mumwe muchina. Ndinovimba tinogona kukubatsira!